Xasan Sheekh: Wiilkeyga Fahad Yaasiin kama yeelayno duminta siyaasadeed uu wado
Fahad Yaasiin oo lagu eedeeyay in uu "burburinayo" siyaasada Soomaaliya
Agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa faragelin ku wadda coddeynta soo aadan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii 8aad ee dowladda federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa eedeyn kulul u jeediyey agaasimaha hay’adda nabad-sugida iyo sirdoonka Qaranka, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Hogaamiyaha xisbi siyaasadeedka Midowga Nabadda iyo Horumarka ayaa ku qeexay Fahad in uu yahay "mulkiilaha" dowlada waqtiga kasii dhacayo.
"Mulkiilaha la sheegayo waa la wada garanayaa nin aan saaxiibo nahay oo Fahad Yaasiin la yiraahdo waaye. Cali iyo Faarax kale oo mulkiile waaye la yiraahdo maa jiro waxaa la rabaa in aan waxba la duug-duugin oo wax walba magaca ay leeyihiin in aan u bixino," ayuu ka sheegay kulan xalay ka dhacay Muqdisho.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, Xasan ayaa hoosta ka xariiqay in aysan aqbali karin in hay’adda sirdoonka ay kaalin ku yeelato doorashooyinka, wuxuuna faragelinta ay haatan ku waddo xulista baarlamaanka ku qeexay "dumin siyaasadeed".
"Fahad madaxtooyadda ayuu Agaasime ka noqdey waa la og-yahay wixii Madaxtooyadda ka dhacay markii uu agaasimaha ka ahaa; hay’adda nabad-sugida ayuu tegay waa la og-yahay wixii nabad-sugida ka dhacay wuu kala diray nabad-sugida waa dumiyey duminta uu dumiyey iyadda kaligeed ma duminee ciidanka booliska Soomaaliyeed wuu dumiyey nabad-sugida ayuu ku dumiyey maanta waxa siyaasada dumiyey isaga waaye," ayuu murashax Xasan ka dhawaajiyey.
Xasan ayaa kamid ah murashaxiinta madaxtinimadda doorashooyinka 2020-21 ee shirweynaha uu uga socdo Muqdisho. Kulankaas waxaa soo dedejiyey markii guddiyadda doorashada lagu soo daray saraakiil dhanka sirdoonka.
"Marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed in ay fahmaan saaxiibkey wiilkeyga [Fahad Yaasiin Daahir] disaster [musiibo] ayuu ka shaqeynaya; hoos waan ugu sheegnay, public-na [fagaare] caawaa ugu sheegeynaa. Siyaasadda uu xafiiska ka shaqeynayo ee doorashadda maamuleynaa uu leeyahay waa dumin siyaasadeed, taas waa sababta loo shiray loona shirayo berri dambe, taas annagaa kasoo horjeedna. Amniga dad gaar ah ayaa oo xil-saarey laakiin siyaasadda annagaa u joogno dumin siyaasadeed ma yeelayno annaga," ayuu xusay.
Fahad Yaasiin Daahir oo gacansaar dhow dowlada Qadar taasoo maalgelisay ololihii doorashadda Farmaajo ee 2016 isla markaana hadda ka shaqeyneysa soo laabashadiisa 2020-12 ayaa ah mas’uulka ugu tunka weyn xukuumaddan.
Deni oo Muqdisho kula kulmay Xasan Sheekh iyo siyaasiyiin kale
Soomaliya 02.09.2020. 14:45
Madaxtooyadda Puntland ayaanan fahfaahin qodobada looga hadlay kulankaan.
Golaha Wasiiradda Soomaaliya oo ansixiyey heshiis caalami ah
War Saxaafaded 13.08.2020. 17:21